Nangona i-web scraping ikhethwa kakhulu, kukho izinto ezahlukahlukeneyo ezenza ukuba kube nzima ngakumbi. Ezinye zazo ziquka ikhowudi ye-HTML efomathiweyo kwaye i-block access access block. Imithintelo yomthetho ingaba yinkinga ekujongeni idatha yewebhu ye-scrape njengoko kukho abantu abathile abangayihoxisi ukusetyenziswa kweelayisenisi. Kwamanye amazwe, oku kubonwa njengento yokuxubha. Izixhobo ezinokukunceda ekutshitshiseni okanye ukukhipha ulwazi ziquka iinkonzo zewebhu kunye nolwandiso lweesbhrawuza ngokuxhomekeke kwisetyenzisi sisebenzisayo. Idatha yewebhu ye-scrape inokufumaneka kwi-Python okanye nakwi-PHP. Nangona le nkqubo idinga ubuninzi bezakhono, kunokuba lula ukuba iwebhusayithi ayisebenzisayo ilungileyo.